Myanmar Hacker Evolution | Shwekoyantaw
Published : 9:54 PM Author : shwekoyantaw
Myanmar Hacker ဆိုတာနဲ့ပတ်သတ်ရင် တော်တော်များများက Blink Hacker Group ကိုပဲ ပြေးမြင်ကြတယ် ဟုတ်ပါတယ် Blink Hacker Group ကို ဘယ်လိုပဲ မြင်မြင်သူတို့ရဲ့လုပ်ရပ်တွေ ဟာ ဘာတွေပဲဖြစ်ဖြစ် သူတို့ဟာ Myanmar Hacker Evolution ( မြန်မာ ဟက်ကာ အုံကြွမှု ) အပေါ် အတော်ကြီးမားတဲ့ သက်ရောက်မှု ရှိခဲ့တယ်ဆိုတာပဲ.။
တကယ်တော့ BHG မပေါ်ခင်ကတည်းက မြန်မာ ဟက်ကာတွေရှိခဲ့တာပဲ ။ Planet Creator တို့ YEHG ( YGN Ethical Hacker Group ) တို့ လို Hacker Group တွေလည်း ရှိခဲ့တာပဲ ။
ပြီးတော့ YEHG ကို DDos တိုက်လို့ ပြဿနာတွေ တက်ကုန်တာမျိုးလို Hacker တိုက်ပွဲတွေလည်း ရှိခဲ့ဖူးတာပဲ ။ MMSO လို Hacker Forum သီးသန့် မဟုတ်သော်လည်း Hacking & Security Forum တွေရှိခဲ့တာပဲ ။ မဇ္ဈိမ ကို DDos တိုက်ခဲ့ပြီး Cyber War အသွင် လုပ်တာလည်း ရှိခဲ့ဖူးတာပဲ ။ ဒီအထိ Hacker Evolution ( ဟက်ကာ အုံကြွမှု ) ဆိုတာမျိုးဖြစ်မလာသေးဘူး ။
၂၀၁၂ Anonymous , Wikileaks , lulz တို့ကျေးဇူးနဲ့ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ Hacker အုံကြွမှုကြီးက မြန်မာနိုင်ငံကို ရိုက်ခတ်လာတယ်လို့ပဲ ပြောရမလား . ?? Blink Hacker Grop ဆိုပြီး အဖွဲ့အစည်း တစ်ခု ပေါ်လာတယ် ။ စလာတုန်းကတော့ စစ်အစိုးရနဲ့ပတ်သတ်တဲ့ မီဒီယာ တွေကို တိုက်ခိုက်မယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းပြချက်နဲ့ ခေတ်လူငယ် Website ကို စတင် တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ် ။ YTP ကို DDos နဲ့ တိုက်ခိုက်တယ်လို့ ကြေညာခဲ့တယ် ။ ဒီမှာပဲ နည်းပညာသမားတော်တော်များများအပြင် နိုင်ငံရေးသမားတွေ အခြား နည်းပညာ နယ်က မဟုတ်တဲ့လူတွေရဲ့ အာရုံစိုက်မှုကို ရရှိခဲ့တယ် ။ နည်းပညာနယ်ပယ်ရဲ့ အပြင်ဘက်က လူတွေရဲ့ ဦးနှောက်ထဲမှာ မြန်မာဟက်ကာ ဆိုတဲ့ အတွေးအခေါ်တစ်ခုကို ထည့်ပေးခဲ့တယ် ။
BHG စတင်တည်ထောင်ပြီး 1st Generation အဆုံးသတ်ခါနီးမှာ Myanmar Hacker Forum တစ်ခု တည်ထောင်ဖို့ကြိုးစားကြတယ်　။　ဒါပေမယ့်　အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်　အဲ့ဒီ့ဖိုရမ်　ပြီးဆုံးမသွားဘူး　။　ဒီတော့　ပထမဆုံး　မြန်မာ　ဟက်ကာ　ဖိုရမ်ကို　ပြောဆိုရင်　အဲ့ဒီ့　ဖိုရမ်ကို　ပြရလိမ့်မယ်　။　အောင်မြင်တာ　မအောင်မြင်တာ　က　တစ်ကြောင်းပေါ့　။
BHG　1st Generation က　Myanmar Website တွေကို　စတင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့အချိန်မှာပဲ　Myanmar Hacker University ဆိုပြီး　wall.fm အခြေစိုက်　ဆိုဒ်တစ်ခု　ထွက်လာပါတယ်　။　BHG ထက်စာရင်　သူတို့က　ပိုပြီး　Open　ဖြစ်ပါတယ်　။　သို့သော်လည်း　ပညာအဆင့်အတန်းမှာတော့　နိမ့်ကျပါသေးတယ်　။　အားရစရာကောင်းတာတစ်ခုကတော့　စည်းလုံးမှုပါပဲ　။　သူတို့　အလွန်စည်းလုံးပါတယ်　။　ကျွန်တော့်အမြင်မှာ　ရိုင်းပင်းတယ်　လို့　မြင်တယ်　။　နောက်ပိုင်း　သူတို့　Myanmar Hacker Forums ဆိုပြီ　Hack Forums တစ်ခု　တည်ထောင်လိုက်ပါတယ်　။　ပထမဆုံး　မဟုတ်သော်လည်း　Active အဖြစ်ဆုံး　အကြီးမားဆုံး　ဖိုရမ်လို့　ပြောရပါလိမ့်မယ်　။
ဒီလိုနဲ့　BHG 1st Generation ပျက်စီးသွားပါတယ်　။　သူတို့　အဖွဲ့ဖျက်ကြောင်း　ကြေညာပြီး　မကြာခင်မှာပဲ　Myanmar Cyber Army ဆိုတာ　ပေါ်လာပြီး　Myanmar Website တွေကို　တိုက်ခိုက်ပြန်တယ်　။　ဒါ　နည်းနည်းတော့　တိုက်ဆိုင်မှုက　ကြီးမားသလို　ခံစားရပါတယ်　:-P
သိပ်မကြာပါဘူး　Blink Hacker Group ကပဲ　2nd Generation အဖြစ်　လုံခြုံရေးအရ　အားနည်းသော　မည်သည့်　Website ကိုမဆို　တိုက်ခိုက်မယ်ဆိုပြီး　ပြန်လည်　ထွက်ရှိလာပါတယ်　။　ဒီအချိန်　Myanmar Hacker Uniteam ဟာ　လူသိများခြင်းမရှိသေးပါဘူး　။　ဒီအချိန်မှာ　Operation BD ဆိုတဲ့　Operation တစ်ခု　Myanmar Uniteam က　စတင်ခဲ့ပါတယ်　။　Myanmar Hacker Uniteam က　လူတွေ　BD Website တွေကို　တိုက်ခိုက်နေချိန်မှာ　BHG ဟာ　Myanmar Website တစ်ခုကို　တိုက်ခိုက်ပြီး　BD Hacker တွေကို　Greetz လုပ်ခဲ့လို့　အညိုငြင်ခံခဲ့ရပါသေးတယ်　။
ရိုဟင်ဂျာကိစ္စမှာတော့　Myanmar Hacker Uniteam , BHG အပါအ၀င်　မြန်မာဟက်ကာအရေးလှုပ်ရှားသူတော်တော်များများ　စုစည်းမိလာပါတယ်　။　ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်　Website တွေကို　တိုက်ခိုက်ရင်း　ဆန္ဒပြုကြပါတယ်　။　အခြား　နည်းပညာသမားတွေအပြင်　နည်းပညာအပြင်ဘက်ကလူတွေပါ　Hacking နဲ့ပတ်သတ်တဲ့　Information တွေ　Source တွေကို　မြန်မာလိုသော်လည်းကောင်း　မျှဝေခြင်းများဖြင့်　လွယ်လွယ်ကူကူရရှိလာပါတယ်　။ ဥပမာ DDos လိုဟာမျိုးပေါ့ အတိအကျ အသေအချာတွေမသိသော်လည်း DDos ကို ခြုံသိလာတယ် DDos Tool တွေအကြောင်းသိလာတယ် ။ Myanmar Cyber Army ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်အောက်မှာ Hacktivist တော်တော်များများ စုဝင်လာတယ် ။
ဒီတော့ ခြုံကြည့်ရင် BHG ဟာ နည်းပညာ သမားတွေအပါအ၀င် နည်းပညာနယ်ပယ်အပြင်ဘက်ကလူတော်တော်များများရဲ့ ခေါင်းထဲကို မြန်မာဟက်ကာဆိုတဲ့ စကားလုံးရိုက်သွင်းပေးနိုင်ခဲ့ပြီး MM Hack Forums ကတော့ ပညာတွေမျှဝေတဲ့နေရာမှာ အဓိကကျလာပါတယ်
Labels: other, Philosophy |